Izifundo ze-Android inyathelo ngenyathelo: fumana okuninzi kwiselfowuni | I-Androidsis
Xa sithetha ngazo abaqeqeshiweyo, Sibhekisa kwezi zifundo zimfutshane okanye izikhokelo apho yonke into esisiseko ifundiswa ukusebenzisa ngokuchanekileyo zonke ezo mveliso okanye iinkqubo ezisebenzayo iinqwelo ukudibanisa okwangoku, njengaleyo ye-Android. Kwihlabathi lekhompyuter, kuyacaca ukuba iitutorials ziyilelwe ukuququzelela yonke imisebenzi yabasebenzisi, nge imiyalelo Iyafuneka kwinkonzo engcono, ihlala ilandela ulungelelwaniso olusengqiqweni. Iitutorials ngokomgaqo zibonisa inqanaba elisisiseko, kodwa iya isiba nzima, ke kubalulekile ukuba uzifunde ngokupheleleyo kwaye ube nolwazi olukhulu lokufunda.
Apha ngezantsi uyakufumana olona nyathelo ngamanyathelo okufundisa ukuze ufumane okuninzi kwi-Android okanye ufunde indlela yokuyiphatha ngokuchanekileyo. Awuyazi indlela yokwenza into ngefowuni okanye ithebhulethi yakho? Kweli candelo siza kukuxelela indlela yokwenza nantoni na ngesixhobo sakho.
Ukuphepha njani ukuvala usetyenziso ngasemva kwi-Xiaomi
por UDaniPlay yenzayo Iiyure ze13 .
Iifowuni ze-Xiaomi ziyaziwa ngokugcina ixabiso kunye nomgangatho kuyo yonke le minyaka imbalwa idlulileyo, apho…
Indlela yokubeka intengiso kwiMilanuncios
por UDaniPlay yenzayo Iintsuku ze2 .
Namhlanje sinenani elikhulu leendawo apho sithengisa iimveliso esingazisebenzisiyo….
Ungazikhupha njani iifoto ze-Instagram
por UAron Rivas yenzayo Iintsuku ze3 .
Sonke sinomfanekiso, ividiyo okanye upapasho oluthi ukusuka komnye umzuzu ukuya komnye singaluthandi kakhulu njengaxa…
Ungayizalisa njani iPDF kwiselfowuni yakho: ezona zokusebenza zibalaseleyo
Ukuzalisa ifomu yePDF kwiselfowuni yakho kunokwenzeka. Oku kubulela kwiiapps ezahlukeneyo ezifumanekayo…
Yintoni uLuhlu lweRobinson? sichaza indlela esebenza ngayo kwaye sibhalise
por UDaniPlay yenzayo Iintsuku ze5 .
Ngokuqinisekileyo uya kufumana iminxeba engalindelekanga kwifowuni yeenkampani ezikunika isipho, nokuba yifowuni ephathwayo, ukonga kwi…
Ungatshintsha njani ubuso kwividiyo: ezona zixhobo zibalaseleyo ze-Android
por UDaniPlay yenzayo Iintsuku ze6 .
Ukuhlelwa kwevidiyo kuqhubele phambili ngokutsiba kunye nemida kwiminyaka yakutshanje, ingumsebenzi olula kwabo ba…
Isikrini se-AMOLED okanye se-IPS: yeyiphi engcono
por UEder Ferreno yenzayo Iveki e-1 .
Xa uthenga ifowuni entsha ye-Android, isikrini sesixhobo sidlala indima yokumisela. Hayi kuphela…
Uthintelo kwi-Instagram: yintoni, yenzelwe ntoni kwaye yenziwa njani
I-Instagram yinethiwekhi yokuncokola esivumela ukuba silawule indlela esinxibelelana ngayo nezinye iiakhawunti. Nazi…
I-Plex TV: yintoni kwaye isebenza njani le nkonzo yokusasaza simahla
por UDaniPlay yenzayo Iveki e-1 .
Ngokuhamba kwexesha baye basungula iinkonzo ezahlukeneyo zokusasaza ezibonise ukuba bebelapha ukuze bahlale kwaye…
Indlela yokujoyina uLuhlu lweRobinson: isifundo sesinyathelo-by-step
por UDaniPlay yenzayo Iiveki ze2 .
Mhlawumbi yenye yezona zinto zicaphukisayo kubomi bethu bonke, ukufumana iintengiso ezivela…
I-VPN ingaba luncedo njani kwi-Android yethu?
por I-Androidsis yenzayo Iiveki ze2 .
Ngokuqinisekileyo uvile ngeeVPNs. Le teknoloji isivumela ukuba sitshintshe idilesi yethu ye-IP kwaye kwangaxeshanye siqinise…
Uyifaka njani iVenkile yokudlala kaGoogle kuyo nayiphi na itafile yeAmazon HD ngaphandle kweengcambu okanye iADB
Iiapps zokubukela umabonwakude simahla, nditsho nokuhlawulwa kwendlela nganye yokujonga!
Ezona zicelo zilungileyo zokukhuphela umculo wasimahla
Uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu kuneNetflix kwaye lukhululekile ngokupheleleyo
Uhlola njani i-WhatsApp okanye ugcine iakhawunti efanayo kwiitheminali ezimbini ezahlukeneyo
Yonke into oyenzayo ngokwezifiso i-Android yakho yasimahla !!
Indlela yokutshixa WhatsApp ngegama eligqithisiweyo
Uyilungisa njani ingxaki yezaziso kwii-Smartwatches zaseTshayina
Ungazikhuphela njani izixhobo ezisemthethweni zeeterminal zeSamsung
Indlela yokuqalisa i-Android
Uyikhuphela njani imixholo ye-MIUI, kubandakanya iMIUI 10
[APK] Uyifaka njani iXiaomi Mi Emoji
IMotorola iya kuvavanya i-Android Oreo kwi-Moto G4 Plus
Iifowuni ze-10 ze-BQ ziya kuhlaziya kwi-Android 9.0 Pie
Uluhlu lweefowuni ezihambelana nePie ye-Android 9
Awona maqhinga aphezulu kwiHuawei P20 Pro
Ungawukhuphela njani umculo kwelona zinga liphezulu lesandi. I-FLAC !!
Indlela yokubuza imibuzo kumabali e-Instagram: eyona nto intsha i-Instagram
Uyibeka njani iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish
Ukuhlaziywa kwangoku kunika iingxaki zebhetri kwi-OnePlus 6